इन्फ्लुएन्जाबाट सप्तरीमा तीनको मृत्यु | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०७:०० लेखक नेपाली जनता
सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा इन्फ्लुएन्जाका कारण तीनजनाको मृत्यु भएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को टोलीले रगतको नमुना संकलन गरेको छ ।
उच्च ज्वरो आएको केही दिनमै फरक–फरक ठाउँका, तर उस्तै उमेर समूहका किशोरको मृत्युको कारण खोज्न धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सात चिकित्सकको टोलीले बिरामीको जाँच गरेर फर्किएको छ ।
इडिसिडीका डा. प्रकाशप्रसाद साह, ल्याब टेक्नेसियन डबल बिसी, जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लोकनाथ भट्टराई, विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा। सोनिया भगत, जनस्वाथ्य अधिकृत यादवसहित, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको टोलीले रगतको नमुना संकलन र बिरामीको जाँच गरेको हो ।
टोलीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीन दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरेको छ । २६ भदौसम्म सञ्चालित शिविरमा कञ्चनरूप वडा नम्बर ३, ७ र ९ का पाँचदेखि २० वर्ष उमेर समूहका एक हजार एक सय २२ बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको जाँच गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत यादवले उल्लेख गरे ।
काठमाडौं । भिआइपीहरूको सवारी चलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा ४८ चालकको दरबन्दी छ । तर, ७ जना मात्र मन्त्रीको गाडी चलाउन…
कोशीमा गाडी सहित युवती खसालेर हत्या गर्ने युवकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद
म्याग्दी । जिल्ला अदालतले कालीगण्डकीमा गाडी खसालेर एक युवतीको हत्या गर्ने एक व्यक्तिलाई ३० वर्ष कैद र रु…
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आउँदो शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा प्यानलसहित…
दिमागलाई सधैँ तेज राख्न गर्नुहोस् यी काम
काठमाडौं । एक अध्ययनका अनुसार उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको स्मरणशक्ति पनि ह्रास हुँदै जान्छ । धेरैमा यो समस्या देखा…
नेपालमा प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र दुई हजारका नोट छ्याप्छ्याप्ती, सरकारले चासाे नदिंदा भारू नेपालमा चालु !
काठमाडौं । चिया व्यवसायी आनन्दकुमार मित्तल ८ माघमा विराटनगरबाट पक्राउ परे। प्रहरीले उनको साथबाट दुई हजार दरका चार सय २५…
काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र सरकारको बेवास्ताले ११ वर्षदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माणले अझै पूर्णता पाउन…
हाई ब्लड प्रेसर कम गर्न कुन फलफूल खाने ? जानी राखौँ5views